DFS oo sheegtay in Shabeelada Hoos elagu dilay sarkaal Al-Shabab ah. – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia - Idman news
DFS oo sheegtay in Shabeelada Hoos elagu dilay sarkaal Al-Shabab ah. – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Kadib howlgal qorsheeysan oo ay ciidanka kumaandooska xoogga dalka ee danab ka sameeyeen deegaanka xeebta ee Jilib-marka oo hoosyimaado degmada marka ee gobolka shabeelada hoose ayay ku qaarijiyeen sarkaal katirsanaa Al-shabaab.
Howlgalka oo ay fuliyeen ciidanka sidagaarka ah utababaran ee kumaandooska xoogga dalka danab ayaa lagu dilay C/qaadir yuusf Abuu Xamsa oo Al-shabaab u qaabilsanaa xilalka tababarada Al-Shabaab iyo maaliyada.
Saraakiil ka tursan kumaandooska Danab ayaa warbaahinta ku hadasha afka ciidamada qalabka sida u sheegay in howlgalka lagu khaarijiyay sarkaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab, islamarkaana kuwa kalana ay nolasha ku qabteen.
Previous Somaliland, Jabuuti iyo DDS oo iskaashi yeelanaya – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Next WARKA SUBAX 8:00 AM (30-10-2020) – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia